Ojiji Ugbo Ojiji Ugbo Ojiji China Manufacturer
Nkọwa:Okwute Okwute Walkway,Okwute Okwute Okwute,Egwuregwu Na-ekpo Ọkụ Maka Ijeghari
Home > Ngwaahịa > Mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na windo systerm > Mmiri ahụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ > Ojiji Ugbo Ojiji Ugbo Ojiji
Ezubere maka oge oyi na-eji arụ ọrụ ụkwụ. Na-agụnye ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ nke infrared. Jiri ngwa ngwa ngwa ngwa rụọ ọrụ. Ihe onwunwe PTC na nduzi onwe onye na- eme ka ọ dịkwuo mfe maka njikwa okpomọkụ. Ọ dịghị mkpa maka thermostat. Obere oriri nke na-azoputa ume.
Okwute Okwute Walkway Okwute Okwute Okwute Egwuregwu Na-ekpo Ọkụ Maka Ijeghari Ikwusi Nkpu maka Anya Okwute nke Snow Thrower Nkwalite Onyinye Aka Aka Ogwu Ogwu Ogwu Ogwu Aka Iwe Ike Ike